Fahatongavana fiaramanidina :: Mpandeha valopolo sy roanjato nigadona teny an-tseranan’Ivato • AoRaha
Fahatongavana fiaramanidina Mpandeha valopolo sy roanjato nigadona teny an-tseranan’Ivato
Nigadona teny amin’ny seranana iraisam-pirenen’ Ivato, omaly maraina, ny fiaramanidin’ny kaompania Air France nitondra mpandeha valopolo sy roanjato avy any Frantsa. raha nampikorontana ny sain’ny sokajin’olona sasany izao fisian’ny fiaramanidina mitondra mpandeha avy any ivelany izao dia nanome antoka amin’ny fanarahan-dalàna sy ny fanesorana ny ahiahy manoloana ny mety hisian’ny fitondrana tsimokaretin’ny Covid-19 eto amintsika ny Fanjakana. Notapahin’ny Filankevitry ny minisitra farany mantsy ny fandrarana ny fitaterana olona avy any ivelany mankaty Madagasikara.
Samy nanazava ny antony mbola nanekena an’io sidina io avokoa na ny fitaleavan’ny serasera sy fifandraisana eo anivon’ny Fiadidiana ny repoblika na ny minisiteran’ny Fitaterana sy ny fizahantany ary ny famantarana ny toetrandro. Eo aloha ny fanomezan-toky amin’ny fanaraha-maso atao amin’ireo mpandeha rehetra, voalaza fa natoka-monina amina trano fandriambahiny ary ambenan’ny mpitandro ny filaminana. Faharoa ny fanamafisana ny fanaovan’izy ireo fitiliana ny tsimokaretina sy tsy nanekena afa-tsy izay nahazoana valiny miiba talohan’ny fiaingany, kanefa tsy maintsy harahina fitiliana (PCr) hatrany amin’izao fahatongavan’izy ireo eto Madagasikara izao.
Sidina voaomana mialoha
Ny mbola fisian’ny sidina nitondra mpandeha avy any ivelany ihany koa no nohamafisin-drakotomanga rinah sy randriamandranto Joel, izay nampahafantatra fa “sidina nahazo alalana tamin’ny 30 marsa 2021 noho ny fangatahan’ny masoivoho Frantsay ity nigadona omaly teny Ivato ity. Nahemotra ny fahatongavan’io fiaramanidina io noho ilay fanapahan-kevitra tamin’ny Filankevitry ny minisitra, tamin’ny alarobia lasa teo, izay niandrasana ny fihenan’ny trangana valanaretina eto Madagasikara”.
Fantatra fa neken’ny Filankevitry ny minisitra rahateo ny fampodiana ireo Malagasy taraiky tany amin’ny firenen-kafa, na teo aza ny fepetra fandrarana ny sidina mitondra mpandeha hafa avy any ivelany.
Nambaran-dry zareo avy ao amin’ny minisiteran’ny Fitaterana hatrany ny tsy famelàna an’ireo mpandeha ireo hiriaria, taorian’ny fahatongavany teto amintsika, raha tsy azo antoka ny valim-pitiliana ny tsimokaretina Covid-19 miiba izay arahin’ny fanarahana ny fitokana-monina.